Nezvedu - Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd.
Yiwu Mia Imp & Exp Co, Ltd. yakavambwa muYiwu guta reChina muna 2007, mushure memakore gumi nematatu neruzivo nesupamaketi, cheni-chitoro, wholesales uye vatengesi, Mia Imp & Exp chigadzirwa tambo yakawedzera zvishoma nezvishoma kubva pazvishongo kusvika kumafashoni zvishongedzo, zvigadzirwa zvevana, zvemitambo, zvekuchengetedza zvekufambisa, zvigadzirwa zvepabonde, 3C zvinhu, DIY zvinhu, zvepati zvinhu, zvipfuwo zvinhu uye zvimwe zvakajairika zvigadzirwa. Kuwedzera paavhareji mwero we10% pagore kwemakore gumi nematanhatu akateedzana, Mia Imp & Exp, ine vanopfuura vashandi zana, yasvika pamamirioni makumi matatu emadhora ekuAmerica kutengesa kwegore, uye yakapa imwechete-yekumisa kupinza uye kutengesa kunze kwenyika basa revatambi vanoungana 1000 vekunze uye vekunze vatengi kusvika 2020.
Kuti ukunde kubva kune vanokwikwidza, Mia Imp & Exp ine mahofisi ari muLiwu, Hangzhou neGuangzhou, ichitsvaga China kutsigira zvese zvakafanira zvigadzirwa, mhando yepamusoro nemitengo kune vatengi vedu pasirese. Iine 5000 mativi metres chivakwa, Mia Imp & Exp yakagadzira 3000 mativi metres imba yekuchengetera kuona inoshanduka kuendesa uye 1000 mativi metres showroom inoratidza zvinopfuura zviuru makumi mashanu zvezvinhu.
Kuti tiwane zvekutanga dhizaini dhizaini, isu takarongedza nyanzvi dhizaini timu kubva kuItari neJapan kuti tigare tichinyatsoita Kuti uwane kudzora kwemhando yepamusoro, isu takaronga vane ruzivo QA uye QC zvikwata zvekuchengetedza kudzora kwemhando yepamusoro, uye ndokutanga yedu yekuongorora kambani Menoch Inspection Co, Ltd kusangana nezvinodiwa zvemhando yepamusoro.
Zvichakadaro, tinoramba tichienda kuchirimo / Autumn Canton zvakanaka kubvira 2007, uye zvakare kuenda kune akakosha maficha muHong Kong, USA, Germany, UK, Japan uye ect. kuva nemikana yakawanda yekusangana nevatengi vedu vekare kumeso, uye zvakare tinogona kusangana nevatengi vatsva.
Yedu Line YeBhizinesi
Kutenga mumiririri sevhisi kwese China
Ndiine mahofisi muYiwu, Hangzhou, uye Guangzhou, kutsvaga china kutsigira ese akakodzera zvigadzirwa, mhando yepamusoro nemitengo.
Imwe-yekumira Export kambani
Fashoni zvishongedzo, zvevana 'accessories, zvemitambo zvinhu, yekuchengetedza nzvimbo, zvigadzirwa zvebonde, 3C zvinhu, DIY zvinhu, zvemabiko zvinhu, zvipfuyo zvinhu uye zvimwe zvakajairika zvigadzirwa.
Kusanganisira yakazara kuongorora, repackage sevhisi, wechitatu-bato kuongorora neChinese neChirungu yekuongorora mushumo.
Yiwu Mia Imp & Exp Chimiro
Sangano Redu Sisitimu
■ Makore gumi nematatu huwandu hwekutengesa nekutengesa ruzivo ne supermarket, keteni-chitoro, wholesales uye vatengesi.
■ TOP 10 yeasina-chikafu mutengesi anotengesa kunze mu Yiwu. Zvakafuma ruzivo rwekuvaka zvigadzirwa zvitsva mutsara wevatengi.
■ Kupfuurisa 1000 mafekitori akanangana.
■ 3000 mativi mita imba yekuchengetera.
■ 1000 mativi metres chaiyed online showroom mu Yiwu, Hangzhou uye Guangzhou vane zvinopfuura Zviuru makumi mashanu zvezvinhu.
■ Mazana mashanu emamirimita yekutarisa imba yekuchengetera inosanganisira tsono detector uye bvunzo michina.
■ Nyanzvi QA uye QC timu kutarisa zvigadzirwa zvese zvisati zvatumirwa ne standard yeQL.
■ Mitauro yakawanda sevhisi kusanganisira Chirungu, chiJapanese, Spanish, ChiGerman, French, Russian.
■ Nyanzvi dhizaini timu kubva kuItari neJapan kune zvigadzirwa uye mapakeji dhizaini.
■ Yakasimba mari uye inishuwarenzi rutsigiro.
■ Zvichienderana muripo mazwi ekutsigira.
■ Inozivikanwa neEU uye USA bvunzo inodikanwa, inopa ECO-inoshamwaridzika zvigadzirwa, kwenguva yakareba kubatana neSGS, TUV uye BV.